Doing Business: voalohany aty Afrika sy tsara toerana maneran-tany i Maorisy | NewsMada
Doing Business: voalohany aty Afrika sy tsara toerana maneran-tany i Maorisy
Par Taratra sur 04/11/2019
Nasongadin’ny Banky iraisam-pirenena (BM) tamin’ny tatitra nataony ao amin’ny Doing Business faha-17, navoaka ny 24 oktobra 2019, ny fiakaran’ny toekarena atsy Nosy Maorisy. Laharana faha-13 maneran-tany izao i Maorisy, ny taona 2020, (faha-20 tamin’ity taona ity), misongadina indrindra aty Afrika.
Izao fiakaran’i Maorisy toerana fito izao, raha oharina ny taona 2019, manambara ny fitohizan’ny fanavaozana any amin’io firenena io eo amin’ny fandraharahana tato anatin’ny 10 taona farany, araka ny fanadihadiana nataon’ny BM. Ahitana izay fanavaozana izay avokoa ny sehatra rehetra any Nosy Maorisy, raha ny tombana nataon’ny Doing Business. Haingana no ho izany rehetra izany ny fananganana orinasa na ny fampiasam-bola amina sehatra rehetra. Lohany miaraka amin’i Rwanda aty Afrika eo amin’ny toekarena ny Nosy Maorisy, anisan’ny misongadina amin’ny fandraharahana eran-tany.
Miavaka ihany koa amin’ity Doing Business ity ny toerana misy an’i Togo, laharana faha-137 tamin’ny 2019, lasa faha-97 amin’izao 2020 izao. Nahazo toerana 40 tao anatin’ny herintaona monja. Hita mivoatra koa ny toekarena any Senegaly, any Nizeria, any Zimbabwe, any Côte d’Ivoire, any Ouganda, ary any Niger. Samy nahazo toerana 10 na 15 ireo firenena ireo. Tsy misy fiovana kosa any amin’ny laharana ambany, na vao mainka mihemotra ny eto Madagasikara, i Sierra Léone, i Kongo Brazzaville, raha ny tatitra hita ao amin’ny Doing Business navoaka farany teo.